China Masinina famokarana rano madio sy mpanamboatra | Hanketo
fikorianan'ny masinina fanodinana rano madio: rano mangatsiaka → tanky rano manta → paompy booster → sivana fasika quartz → sivana karbonina mihetsika → fanalefahana ion → fanivanana mazava → osilosa averina → sterilizer ozone → fitoeran-drano madio → paompy rano madio → fanasana tavoahangy, famenoana sy famonoana tsipika fameno → fandefasana → fanaraha-maso jiro → masinina fanamainana → marika napetraka → masinina marika mihena ny etona → milina fanasitranana kaody → milina fonosana horonantsary PE mandeha ho azy.
Ny orinasa dia manome ireto fitaovana manaraka ireto: 1. Rano mineraly madinidinika sy salantsalany ary fantsom-pamokarana famarinan-drano voadio 2000-30000 / ora. 2. Ny tsipika famokarana mafana ranom-boankazo sy dite dia 2000-30000 tavoahangy / ora. 3. Ny zava-pisotro misy karbaona dia vokarin'ny isobaric mameno tavoahangy 2000-30000 / ora.
(1) ny rafi-pitantanana ambaratonga voalohany: ny sivana antonony fasika quartz dia ampiasaina hanalana ny antsanga, harafesina, akora koloidera, solida mihantona ary zavatra hafa manimba ny vatan'olombelona ao anaty rano manta miaraka amin'ny sombiny mihoatra ny 20 μm. ny rafitra sivana mandeha ho azy dia mandray valizy fanaraha-maso mandeha ho azy, ary ny rafitra dia afaka mandeha ho azy (amin'ny tanana) manao andiana hetsika toy ny backwash sy ny flushing mandroso. Hamarino ny kalitaon'ny rano amin'ny fitaovana ary hanitatra ny androm-piainan'ny fitaovana. Mandritra izany fotoana izany, ny fitaovana dia manana rafitra fikolokoloana tena hampihenana ny vidin'ny fikolokoloana.
(2) ny rafi-pitantanana ambaratonga faharoa: ny sivana karbaona ampandehanana ny akorandriaka dia ampiasaina mba hanesorana ireo loko, fofona, zavatra biolojika biolojika, sanda amoniaka sisa tavela, fandotoana bibikely ary zavatra hafa manimba sy loto ao anaty rano. Rafitra fanaraha-maso sivana mandeha ho azy, amin'ny fampiasana valizy fanaraha-maso mandeha ho azy marika, ny rafitra dia afaka mandeha ho azy (amin'ny tanana) manao andiana hetsika toy ny backwash, flushing tsara, sns.
(3) ny rafi-panabeazana dingana fahatelo: ny resina avo lenta dia ampiasaina hanalefaka ny rano, indrindra hampihenana ny hamafin'ny rano, hanesorana ny ion-kalsioma sy manezioma (refy) ao anaty rano, ary hanatanterahana ny famerenan'ny resin manan-tsaina. Ny rafitra sivana mandeha ho azy dia mandray ny fanamainana rano mandeha ho azy, ary afaka miverina mandeha ho azy (amin'ny tanana) ny rafitra.
(4) ny rafi-pitsaboana pretreatment amin'ny dingana fahefatra: sivana mirefy 5 μ m ny halaviran'ny pore (dingana tokana ambanin'ny 0.25 taonina) no ampiasaina hanadiovana bebe kokoa ny rano, hanatsara ny faharatsian'ny rano sy ny chroma amin'ny rano ary hiantohana ny fiarovana ny rafitra RO.
(5) milina lehibe amin'ny fanamasinana rano nodiovina: ny teknôlôjia osmosis miverimberina dia nalaina tamin'ny fitsaboana fanalefahana rano hanala ireo akora vy mavesatra sy loto hafa manimba ny vatan'olombelona toy ny kalsioma, manezioma, firamainty ary merkiora ary mampihena ny hamafin'ny rano. Ny tahan'ny fanalefahana rano dia mihoatra ny 98%, ary ny fihaonan'ny rano voadio izay fenitra nasionaly dia novokarina.
(6) rafitra fanamorana: ny sterilizer ultraviolet na ny ozone generator (voafaritra arakaraka ny karazany isan-karazany) dia ampiasaina hanatsarana ny fiainana talantalana. Mba hanatsarana ny vokany dia tokony afangaro amin'ny rano ny ozone ary tokony ampifanarahana amin'ny refy tsara indrindra ny fifantohana.
(7) fanasana indray mandeha: milina fanasan-tavoahangy semi-automated vy no ampiasaina hanadiovana ny rindrin'ny tavoahangy anatiny sy ivelany, ary azo ovaina ny habetsaky ny rano fanasana.
Previous: Masinina famokarana zava-pisotro misy alikaola
Manaraka: Masinina sakafo am-bifotsy sy fitaovana famokarana Jam
Fitaovana ranona Bayberry